Isihlomelo sezilwanyana zasekhaya kwisivumelwano sokuqeshisa- Imigaqo-nkqubo yezilwanyana eziLungileyo - i-NJ kunye ne-NY yeeNdawo zeNdawo, uMhlaba, uKhuseleko lokuBhengeza kunye namaGqwetha okuBhengeza
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Isihlomelo sezilwanyana zasekhaya kwisivumelwano sokuqeshisa- Imigaqo-nkqubo yezilwanyana eziLungileyo
Isihlomelo sezilwanyana zasekhaya kwisivumelwano sokuqeshisa- Imigaqo-nkqubo yezilwanyana eziLungileyo
Agasti 5, 2019 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Inkcazelo: Inqaku ngentsingiselo yesongezelelo sezilwanyana kunye nezibonelelo zokuba ikopi enye inamathele kwisivumelwano sokuqeshisa. Ikwadwelise imixholo ephambili ekhankanyiweyo kuyo
Isongezo se-pet kwisivumelwano sokuqeshisa- Imigaqo-nkqubo yezilwanyana zasekhaya: ezona ndlela zibalaseleyo
Yintoni isihlomelo sezilwanyana zasekhaya?
Xa kuqeshiswa ikhaya, umnini-ndlu kunye nomqeshisi bangena kwisivumelwano sokuqeshisa esibeka iimeko zoqeshiso. Rhoqo, isivumelwano sengqeshiso siqukethe igatya elichaza ukuba izilwanyana ezifuywayo ziyavunyelwa na kuloo ndawo okanye akunjalo. Kodwa ngamanye amaxesha, kuthe cwaka kumbuzo wezilwanyana ezifuywayo. Kuzo zombini iimeko, isihlomelo sezilwanyana ziluncedo kuwo omabini amaqela ukuseka umgaqo-nkqubo wezilwanyana.
Isihlomelo sezilwanyana ezongeziweyo kongezwa kwisivumelwano sokuqeshisa kwaye sibophelela ngokusemthethweni kuwo omabini amaqela. Itsho imvume yomnini-mhlaba yokuvumela izilwanyana kwipropathi yakhe ngelixa umqashi evuma ukulandela imiqathango ebekiweyo kwisihlomelo. Kuba umnini-ndlu ngumnini wepropathi, unamandla amakhulu okuxoxa ngemibandela yongezwa. Kuya kufuneka ukuba isayinwe ngabo bonke abaqashi, nokuba ngaba banaso isilwanyana okanye abanaso. Ngale ndlela, ukuba umqeshi uthatha isigqibo sokufumana isilwanyana kamva, uya kuyazi imeko afanele ukuba ayigcine.
Ngubani ofanele afumane isihlomelo sezilwanyana zasekhaya?
Ukuba nomgaqo-nkqubo wezilwanyana oza kuhlala kwizibonelelo zombini umnini-ndawo kunye nomqeshi. Kuba abantu abaninzi banezilwanyana ezirentwayo kunye nezindlu eziqeshiswayo, ukungavumeli izilwanyana ezifuywayo kwipropathi yokuqeshisa kuya kulinciphisa kakhulu inani labaqeshisi kubaqeshisi. Kwelinye icala, abaqeshi baya kuhlala ixesha elide kwipropathi njengoko uninzi lwabanini bomhlaba bengavumeli izilwanyana ezifuywayo. Banokuhlawula ngaphezulu indawo enobuhlobo yezilwanyana.
Zithini iziphumo zokungafakwa kwesongezo isilwanyana?
Ngaphandle kwesongezo sesilwanyana sasekhaya, bobabini umnini-mhlaba kunye nomqeshi kufuneka baphulukane. Umnini-ndawo unokuphulukana nexesha lokufumana umqeshi omtsha. Ngokufanayo, ke ngoko umqeshi uya kuphulukana nexesha lokufumana ikhaya elitsha. Kuya kufuneka basebenzise imali eyongezelelweyo- umnini-ndlu kumonakalo awenzileyo kwipropathi; umqeshi ngokuhlawula intlawulo. Umnini-ndlu kusenokufuneka ajamelane nabamelwane bakhe ukuba bacaphukiswe yimisebenzi yesilwanyana ngelixa umqeshi angahlala kwisikhundla sokunikezela isilwanyana.
Yintoni ekufuneka ibandakanywe kwipolisi yezilwanyana zasekhaya?
Ukuvumela izilwanyana zasekhaya kwipropathi kubeke umngcipheko othile njengomonakalo wepropathi yakho. Ukuthintela ezi, umnini-ndawo kufuneka aqaphele kubandakanya ezinye imigaqo kwisivumelwano sokongezwa kwesilwanyana.
Okokuqala nokuphambili, khankanya amagama omqeshisi kunye nomqeshi; Ukuchongwa kwesilwanyana- igama laso, uhlobo lwaso, ibala, imibala kunye nomhla wokuqalisa kwesivumelwano.
Iindidi zezilwanyana ezifuywayo ezivunyelweyo: Uninzi lwabanini bamhlaba bavumela kuphela izilwanyana ezixhaphakileyo ezinjengezinja, amakati, iihagu, iihagu zerhasi, iintlanzi neentaka. Chaza iintlobo zezilwanyana ezifuywayo zivunyelwe kunye nenani lezilwanyana ezifuywayo. Umnini-ndawo unegunya lokuthintela izinja ezenzelwe ukuba 'yinzala eyingozi.'
Ngokucacileyo, chaza ukuba kuphela izilwanyana ezirentayo ezivunyelweyo kwipropathi. Kwakhona khankanya ukuba iindwendwe zivunyelwe ukuba zize nezilwanyana zasekhaya ekhaya.
Chonga iindawo ezithile apho izilwanyana ezigcina izilwanyana zingagcinwa khona.
Bandakanya ukubonelela ngeempawu zokuchonga ngokucacileyo kwizilwanyana kunye nobungqina bokugonywa. Olu gonyo kufuneka luhambelane nemigaqo yendawo kwaye umqeshi kufuneka anike ubungqina bokufana. Kuya kufuneka abe nawo onke amaxwebhu ayimfuneko ngokubhekisele kwisilo-qabane.
Uxanduva lomqeshi: Jongisisa uxanduva lwabaqeshi ngokubhekisele kwizilwanyana zasekhaya. Umzekelo, umqeshi kufuneka agcine isilwanyana siphantsi kolawulo, kufuneka acoceke emva kwesilwanyana, angagcini isilwanyana singabekwanga xesha xesha lide. Chaza uxanduva lomqeshi ukuba isilwanyana sibange nawuphi na umonakalo kuloo ndawo.
Faka igatya elivumela ukuguqulwa kwesihlomelo ngokunika isaziso esifanelekileyo kumqeshi. Chaza ukuba le mithetho intsha ayizukusebenza kubaqeshi esele benezilwanyana zasekhaya ngaphambi kokuba kwenziwe utshintsho.
Yonke imigqaliselo kwisihlomelo kufuneka ihambelane nomthetho welizwe elichaphazelekayo kunye noMthetho weZindlu eziLungileyo. Umzekelo, ukuba umnini-ndawo uthatha isigqibo sokunyanzelisa ukubhatala umrhumo wesilwanyana kwaye udlula elona nani liphezulu leedipozithi zokuhlawuliswa ngumnini-ndawo phantsi kwemithetho yaseburhulumenteni, loo ntlawulo ayizukuba semthethweni. Kwakhona, ukubiza imali kumqeshi egcina isilwanyana sasekhaya njengeqabane ukulungiselela ukukhubazeka kwakhe kunokuba Ukophulwa koMthetho weZindlu eziLungileyo.
URoxana, umbhali ngokutsala umnxeba kunye nomntu ofundayo udale ukuqaqamba kunye nomxholo ophawulekileyo kwiiwebhusayithi ezininzi kwimbonakalo yeCandelo leShishini. Unokuqonda okulinganayo malunga nokusebenza kwangaphakathi kwamashishini amaninzi amashishini, okwenza ukuba abe yingcali ephambili kweli candelo.
Ngaba ukubhengezwa njengongenamali kubhubhisa amanqaku okuthenga ngetyala kwaye kuyimalini ekuqeshweni kwegqwetha ukuba lifayilishe ukubhengezwa?
Unokwenza ntoni emva kokuba kuthengiswe ngerhafu kwiNew Jersey?
Amalungelo abaqeshi kumgaqo-nkqubo we-NJ wokuTyhilwa ngaphambi nasemva kokuthengisa kweNS
I-FAQ malunga neSahluko 13 Ukuchithwa kwemali
Ndinesivumelwano neebhanki zam ukuba kufuneka ndifake impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ yam?
Zeziphi iindidi zokungabinamali kuwe?
Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo kwi-Foreclusive ye-NJ yam nangona iintsuku zam ezingama-35 zivukile?